အခြေခံအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအစားအစာများထားသိုလ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အခြေခံအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအစားအစာများထားသိုလ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
Posted by mipukay on Jun 14, 2012 in Business & Economics, Ideas & Plans |5comments
အကြောင်းမှာမူ စာရေးသူတို ့နိုင်ငံတွင်
လွယ်ကူစွာဝယ်ယူစားသုံး နိုင်ခြင်း၊ စားစရိတ်အပြင်
အခြေအနေဆိုးကြုံတွေ ့ရမှုနည်းပါးခြင်း၊ ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုဒါဏ်
သို ့ပါသောကြောင့်စာရေးသူနည်းတူ အသင်မိတ်ဆွေတို ့လည်း
မည်သည့်အကြောင်း နှင့်မဆို အကယ်လို ့များဆိုသော
အခြေအနေတစ်ရပ် အတွက်၊ မည်ကဲ့သို ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို
စနစ်တစ်ကျပြုလုပ်သင့်သည် ဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်စားမည်ထင်ပါသည်။
ထို ့ကြောင့်စပ်စပ်စုစုပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေးရင်း အောက်ဖော်ပြပါ
ဖတ်မိမှတ်မိသမျှကို မြန်မာတို ့၏ အခြေအနေနှင့် ဆီလျှော်အောင်ရေးသားပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
အကယ်၍အသက်ရှင်ရပ်တည်လိုသောအတွေးသင့်တွင်ရှိလာမည်ဆိုပါက အရေးအကြီးဆုံးအထက်ပါအချက်(၃) ချက်ကို သင်သိထားရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို ့သည်သင့်အတွက်ရေရှည်စီမံကိန်းအခြေခံများဖြစ်ပါသည်။
သင်နှင့်သင့်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများကိုလဲဘဲ အကယ်၍အကူအညီပေးလိုသည်ဆိုပါက သင်သည် ၉၀%ထက်ကျော်လွန်ကာ လူထုအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားသည့်အထဲတွင်ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
• (က) အစားအစာသိမ်းဆည်းခြင်း
• (ခ) ရေသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သန် ့စင်ခြင်း
• (ဂ) ကယ်ဆယ်ရေးအဆောက်အဦး
အထက်ဖော်ပြပါ(၃)ခုတွင် ရေသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည်။
သို ့သော်အရေးကြီးမှုအစဉ်အလိုက်မှာ အစားအစာ၊ ရေ နှင့် အဆောက်အဦးဖြစ်ပါသည်။
အစားမစားဘဲရက်အပါတ်အနည်းငယ်(သို ့မဟုတ်)တစ်လခန် ့သင်အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်အတွက် အဘယ်ကြောင့်အစားအစာက ပိုအရေးကြီးရပါသလဲ။
• အစားမရှိလျှင်သင်အားနည်းလာမည်။ထိုအခါ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ မူးဝေခြင်းဖြစ်လာပြီး အသက်ရှင်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လှုပ်ရှားမှုများကို
ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုသကဲ့သို ့အချိန်တိုအတွင်းရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ရေကအရေးကြီးပါလိမ့်မည်။ သို ့ပါသော်လည်း အရည်းအချင်းမရှိသည့်သူများပင်လျှင် ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိရေကိုရှာဖွေရန်မခက်လှပါ။
(ဘေးကင်း၊ သန် ့ရှင်းသောရေဖြစ်ရေးကတော့သီးခြားဇတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို
• (က-က) အစားအစာဘယ်လောက် သင်လိုအပ်မည်လဲ။
 (က-က-၁) ဘာကြောင့်အများကြီးလိုမှာလဲ။
 (က-က-၂) ရိုးရာနည်းအရထိမ်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဈေးကွက်ဝင်အစားများ
• (က-ခ) အလှည့်ကျအစားအစာ
• (က-ဂ) အထူးအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအစာများစာရင်း
• (က-ဃ) အိမ်တွင်းဖြစ်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအစားအစာများစာရင်း
• (က-င) တောလိုက်ခြင်း နှင့်သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်မှစုစည်းထားသောအစာ
အတိုဆုံးဖြေပါမည်။ ခက်ခဲသောအချိန်တိုင်းတွင်သင်ဘယ်သောအခါမှအစားအစာအများကြီး သိုလှောင်ပြီးသား သင့်တွင် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဘယ်လောက်ဆိုသည်မှာသင့်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်နိုင်ပြီး သင့်ရပ်တည်ရေး အတွက် ယာယီလိုအပ်မည့် ပမာဏဖြစ်သည်ဟုအဖြေထွက်ပါသည်။
သင်သည်အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ ့နေရပြီလို ့ယူဆကြရအောင်။
(စာကြွင်း။ ၊အခြားသောအခြေအနေအမျိုးမျိုး ဖြစ်သည့်မိုးကြိုး မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊
ရထားမှောက်ခြင်း၊ အနုမြူယိုစိမ့်ခြင်း နှင့် အကြမ်းဖက်ခြင်း စသည် တို ့နှင့် ပါတ်သက်သည့်ကြုံတွေ ့
လူထုအုံကြွမှု(သို ့) သပိတ်မှောက်ခြင်း။ ။
• ကားထဲတွင်ပိတ်မိနေခြင်း (သို ့) ရုံး၊ကျောင်းစသည်တွင်ပိတ်မိကာ မိသားစုနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်ခြင်း
• လူထုအုံကြွမှုမိမိနေထိုင်ရာပါတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြန် ့ကူးလာခြင်း
• လူပေလူတေကလေးများ မှ စိုးမိုးကာပြသနာပေးသောအခြေအနေဖြစ်လာခြင်း
• လူကိုခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း(သို ့) တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း
• မီးရှို ့မှုကိုသတ်ဆိုင်ရာမှရာယီသာဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အခြေအနေနှင့်ကြုံရခြင်း
• ထင်ရာစိုင်းနေသည့်လူထုအပေါ်ရဲအဖွဲ ့အစည်းမှမလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း
ဤအခြေအနေတွင် ၃ ရက်စာအစားအစာ ဖူလုံရုံဖြင့်ဖြစ်ပါလား။
• သို ့မဟုတ်တစ်နှစ်စာဆိုလျှင်လုံလောက်မည်လား။
• သင့်အတွက်မည်သည့် အခြေအနေက အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို စာရေးသူမခန် ့မှန်းနိုင်ပါ။
• သို ့ရာတွင် အကြံပြုချက်များသည်မှာ ၂ ပါတ်စာ (သို ့) ထို ့ထက်ပိုသောကာလအတွက်ပြီး
တစ်ယောက်ချင်းစီစာအနည်းဆုံးပမာဏကို အခြေအနေပေါ် မူတည်ကာတွက်ချက်သင့်ပါသလား။
• ၁ လ (သို ့) ၃ လစာလား။
• အခုသင် ၁ နှစ်စာအတွက်လို ့ဖြေချင်ပါသလား။
• ကိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင် ဘယ်တော့မှမလိုဘူးလို ့ဖြေကြည့်ရအောင်လား။
• တစ်နှစ်စာဆိုရင်တော့ အင်းအများကတော့ပိုလွန်းသည်ဟုထင်ကြပါမည်၊ ဒါပေမယ့်သင်သိထားဖို ့က လုံခြုံစိတ်ချရသည့်ပမာဏအတွက် သင်ဘယ်တော့မှ ဝမ်းနည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “အလိုထက်ပိုသည်မရှိ”ကိုသင်ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
တစ်လစာအတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ ့များရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ ့ဝယ်နိုင်ပါ့မလဲလို ့သံသယဖြစ်နေပြီလား။
အသင်မိတ်ဆွေ သင်ရော၊စာရေးသူရောသည် အပိုဝင်ငွေမရှိသော လက်လုပ်လက်စား(သို ့) လခစားများဖြစ်ကြ ပါသည်။ ထို ့အတွက်သင့်ထံတွင် ၁ လစာစားသောက်စရိတ်ကိုအနည်းငယ် ဖူလုံရုံတော့ရှိမည်ထင်ပါသည်။
(စာကြွင်း။ ။အဲမရှိဘူးလို ့တော့မတွေးမိပါစေနှင့်ရှိသမျှလေးကိုပေါင်နှံရောင်းချကာရသမျှကိုငွေကြေးဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဥပမာ-ပုဆိုး၊ထမီအလတ်စားပေါင်လျှင် ၁ ထည် ၂၀ဝ ကျပ် ဖြင့်အနည်းဆုံး ဆန်တစ်အိတ်စာတော့ ဖူလုံနိုင် ပါလိမ့်မည်။မည်ကဲ့သို ့သော သင့်ပိုင်ဆိုင်မှု ကိုမဆို ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။)
• ပထမဦးဆုံးအနည်းဆုံးပမဏမှစကာလိုအပ်သည့်အမယ်အားလုံးပြည့်စုံကာမှ နောက်ထပ်လက်ကျန်ပိုက်ဆံနှင့် အခရာ ကျသောစားကုန်ကိုထပ်မံကာဝယ်သင့်ပါသည်။
• သင်၏စေ့စပ်မှု နှင့်အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ကာ သင့်တွင်ပြည့်စုံလုံလောက်မှု ရှိအောင်စီမံနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ- ညောင်ပင်လေးဈေး၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ နှင့် စည်သွပ်အစားအစာများဆိုလျှင် လက်ကားရောင်းသောနီးစပ်ရာဈေးကြီးများရှိ ဆိုင်ကြီးများ တွင်လက်လီဆိုင်ထက် အဖိုးနှုန်း ချိုသာစွာ ဝယ်ယူရနိုင်ပါလိမ့်မည်။)
(ငွေကြေးကုံလုံပြည့်စုံ သူများ အဖို့မူမိမိတို ့စိတ်ကူးရှိသမျှစာရင်းပြုစုကာ ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။)
• ဆန် (လေအလုံပိတ်ထားသင့်ပါသည်။)
• မွှေး မုန် ့ဟင်းခါးမှုန့်(ရေနွှေးဖျောရုံဖြင့်သင့်အတွက်ပဲဟင်းတစ်ခွက်ရနိုင်ပါသည်။)
• မွှေးပဲမှုန့် အကျက်မှုန် / အစိမ်းမှုန် ့
• မွှေးဆန်မှုန် ့/ ရွှေကြည်မှုန် ့(မြန်မာဘိန်းမုန် ့ဖုတ်စားနိုင်သည်။)
• ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြာဆံခြောက်
• မြေပဲယို(သို ့)စည်သွပ်ထားသောမြေဲ့ထောပတ်ယို (ကလေးများရောလူကြီးများပါ အချိုအနေနှင့်အာသာပြေစေနိုင်ပါသည်။ (သို ့) မြေပဲ နှင့် ထန်းညက်
• ငြုပ်သီးခြောက်(သို ့)အစိမ်းမှုန် ့(အသား၊ပဲစသည်တို ့ကိုအရသာပြောင်းအောင်ချက်ပြုတ်နိုင်ရန်မှာ ငြုပ်သီးဖြစ်ပါသည်။ ထို ့ကြောင့်စာရင်းသွင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
• မဆလာ (သားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းကို အနံအသက်ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။)
• သကြား (ဆားနှင့်သကြားသည်အရေးပေါ်ဂလူးကိုစ့်အဖြစ်ရေဖျော်ကာသောက်နိုင်ပါသည်။)
• နို ့မှုန် ့(အာဟာရအတွက်ဖြစ်ပါသည်။)
• ဆီ (မြန်မာလူမျိုးတို ့အတွက်သာ)
• ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အကြီး ၃ ထုပ် (သင့်အတွက်အရေးပေါ်ရေသိုလ်လှောင်ကန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်)
• ဒိန်ခဲ (သို ့) ထောပါတ်
• စည်သွပ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ (သို ့) ပဲဗူး (သို ့) အသားဗူး (စည်သွပ်ဗူးဖောက်တံကိုသင်ဆောင်ထားရန်မေ့မည်မထင်ပါ။)
• အိမ်သာသုံးတစ်ရှူး၊ သွားတိုက်ဆေး၊ သကြားလုံး နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးပစည်းများကို သင့်လိုအပ်ချက်အရဝယ်ရာတွင်ဈေးအပေါဆုံးကိုသာရွေးချယ်ပါ။
စည်သွပ်ဗူးသည်သင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစာရေးသူမထင်ပါ။ သို ့သော် ကြာရှည်ခံသဖြင့် သာ ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေရှည်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားနိုင်သည့် ပြောင်းဖူး၊ အာလူး၊ ပဲ၊ ဘူး၊ ဂေါ်ရခါး၊ မုန်လာဥနီ စသည့်မျိုးစေ့များကိုလည်းသင်စုဆောင်းနိုင်ပါသေးသည်။
ကောက်ညှင်းမှုန် ့အထုပ်များဆိုလျှင်လည်း အမှုန် ့ကို ရေနှင့်နယ်၊ ဖက်ထုပ်ပြီးကင်စားနိုင်၏။
ဘာကြောင့်များသင်စားစရာအများကြီးကိုသိုလှောင်သင့်ပါသလဲ။ သင့်ရပ်ဝန်းတွင်လနှင့်ချီကာ တိုက်ခတ်သော နှင်းမုန်တိုင်းများကျနေလို ့လား။
• ကုန်စုံဆိုင်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ စားကုန်မရနိုင်ခြင်း။ (ဥပမာ။ ။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ မြို ့အဝင်အထွက်များပိတ်ဆို ့ခံရခြင်း၊ ကုန်ကားများ လမ်းခရီးတစ်နေရာရာတွင်ပိတ်မိနေခြင်း။)
• သင့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ (သို ့မဟုတ်) အိမ်နီးနားပါးချင်းများ ကိုမျှဝေကျွေးမွေးရန် အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ (ဥပမာ။ ။ သင့်မိသားစုက စားကောင်းသောက်ဖွယ်များ စားနေချိန်တွင်သင့်မိတ်ဆွေကြီးဦးအေး၏မိသားစုများက ထမင်းခြောက် နှင့် ရေမျှောကာသာ စားနေရသည်ဆိုပါစို့သင်မည်သို ့ခံစားရမည်နည်း။ သို ့မဟုတ်ခရီးသွားဟန်လွဲ သင့်အိမ်သို့အလည် အပါတ်ရောက်ရှိနေသော သင့်ဆွေမျိုးသားချင်း၊ သူငယ်ချင်းများက အိမ်မှမပြန်နိုင် ဖြစ်နေသည်ဆိုပါစို ့ဘယ်လိုလဲမိတ်ဆွေ သင်တွေဝေသွားပြီလား။)
• စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းသည် အကျအလွန်ရှားပါ၏။ ဈေးအတက်ဘက်သို ့သာ ဦးတည်တတ်ပါ၏။ သင်ယခုဝယ်ယူထားသမျှသည် သင့်အတွက်အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ပိုလေးများရှိတိုင်းတွင် သင်ကိုယ်တိုင်သေချာစွာစီစစ်ရွေးချယ်ကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
• အောက်ဖော်ပြပါသင့်အတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရေးသတိပြုစရာ များကိုသင်သိထားသင့်ပါသည်။
 သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိပါစေ ။ ။ သင်စုဆောင်းထားသမျှကို လူသိနည်းလေ သင့်ထံသို ့တောင်းခံလာနိုင်ချေနည်းလေဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ တစ်ဘက်သား မနာလိုမဖြစ်ရလေအောင်ကြွားလုံးမထုတ်ရပါ။ ညနေခင်းအချိန်တွင် သင့်အိမ်မှ အလွန်မွှေးကြိုင်သော အမဲသားနှပ်၏ရနံ့သည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော အိမ်နီးချင်းများ၏ ဒေါသကိုဆွပေးသကဲ့သို့မဖြစ်မိပါစေနှင့်။ ထိုအချိန်ထက်လူချေတိတ်သော ညသန်းခေါင်အချိန်တွင် အိမ်တွင်းဝှက်ကာချက်ပြုတ်ပြီး စားလိုက်ပါက သင့်အတွက်ပိုမို လုံခြုံမှု ရှိပါလိမ့်မည်။
 ကြိုတင်စီစဉ်ထားမှုများမှအမြတ်မထုတ်ရ ။ ။ ၎င်းသည် မကျေမခြမ်း ဖြစ်ခြင်း နှင့် ဝဋ်ပြန်လည်မှုတို ့ကို သင်ခံရနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် လိုသည်ထက် အပိုရှိသဖြင့် ပြန်လည်မျှတကာ ရောင်းချလိုပါက ဝယ်ရင်းဈေးဖြင့်သာပြန်လည်ရောင်းချခြင်း(သို ့) သင့်မိတ်ဆွေများသို့ပေးဝေခြင်းများလုပ်သင့်ပါသည်။ အလွန်ကြီးမြင့်သောဈေးဖြင့်ရောင်းချမိပြီ ဆိုပါက သင့်အတွက် အမုန်းခံရခြင်း နှင့် မကျေမခြမ်းဖြစ်ခံရမှု အမြတ်များ ပါသင်ရရှိမည်ကိုသတိထားမိပါစေ။ (အသင်မိတ်ဆွေကို စာရေးသူ အရင်းနှီးဆုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါလိုသည်မှာ ပိုသမျှကိုသိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် ဖလှယ်မှုလုပ်ခြင်းက ရောင်းသည်ထက်ပိုမကောင်းပေဘူးလား။)
 ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးများ ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်တွင် သင့်ကိုယ်တိုင် ဝတ်စားဆင် ယင်မှု ကိုဆင်ခြင်ရပါမည်။ သွေးကြွစေရန်နှိုးဆော်စာတန်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ ပါရှိသော စပို ့ရှပ်၊ နွေးထည်စသည်တို ့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်း၊ တောက်ပြောင် သစ်လွင်လွန်းပြီး ဈေးနှုန်းကြီးသောအထည်များဝတ်ဆင်ပါက ပါတ်ဝန်း ကျင်တွင် ကျွန် ့တော့ကို လုပါ၊ ယက်ပါ၊ ခိုးပါ ဟု ကြေငြာသကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ရွှေငွေလက်ဝတ် ရတနာများကိုသာ အများအထင်မကြီးစေရန် ချွတ်သိမ်းဆည်းလေ့ရှိပြီး အဝတ်အစားတွင်မူ ဂရုမမူမိဘဲရှိလေ့ရှိပါသည်။ သို ့ပါသောကြောင့် မိမိကိုယ် မိမိပြစ်မှတ်မဖြစ်ကြစေရန် သတိပေးလိုက်ရပါသည်။)
 သင်သည်ဆူပူလုယက်မှုများ၏အလယ်တွင်ရောက်နေသည်ဆိုပါစို့သင့်ကိုကူညီပေးရန်တောင်းခံကြည့်ပါ။ အကူအညီတောင်းခံရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ တစ်ဘက်ကလည်း ဓါး၊လှံ၊ လက်နက်တစ်စုံတစ်ရာပါကာ ရန်ပြုသည့်အနေ အထားရှိပါက သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်း ၂ လမ်း ရှိပါသည်။ ကြွက်မြှီးတန်းအောင်ပြေးရင်ပြေး ၊ မပြေးလိုလျှင် ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက် နိုင်သည့်အရည်အချင်းရှိအောင်ကြိုးစားကာ ပြန်တိုက်ရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်အောင်ပြေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆပါသည်။
• ကြိုတင်စုဆောင်းထားခြင်းဖြင့် ဈေးကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်မှုခံရပြီးသားဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ ဈေးဆိုင်တွင်တင်ရောင်းထားသော နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပေါင်မုန် ့တစ်လုံးနှင့်နို့တစ်ပုလင်းသည် မုန်းတိုင်းမတိုက်ခင်တွင်ဈေးလျှော့ရောင်းပါမည်လော။ ခင်းကျင်းထားသောစားစရာမှန်သမျှတို ့သည် မုန်တိုင်းသတင်းစတင်ချိန်တွင်ပင်ပြောင်သလင်း ခါနေသည်ကိုသင်တွေ ့နေကျဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ စားကုန်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားသော အိမ်သုံးပစည်းများဖြစ်သည့် ရေသန့်ဘူး၊ ဘက်ထရီ၊ ဖယောင်းတိုင်၊ တစ်ရှူး၊ မီးခြစ် အစရှိသည်တို ့လည်း ရှားပါးနေပါလိမ့်မည်။ (အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးပစည်းများအကြောင်းကို နောင်တွင်ဖော်ပြပေးပါဦးမည်။)
• ချိနဲ ့ခွေယိုင်ကာ အားနည်းလာမည့် အစားအသောက်ရှားပါးမှုပတ်ဝန်းကျင် အတွက် သင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုပါလိမ့်မည်။ စာရေးသူယခုကဲ့သို ့ဖော်ပြရသည်မှာ အများစုသည် အစာရေစာအနည်းငယ်ဈေးတက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတော့မည် သကဲ့သို့မှတ်ထင်လေ့ရှိကြသောကြောင့်သာ ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှားပါးမှုကပ်တွင် သင်နစ်မြုပ်နေ သည် ဖြစ်စေ၊ မနစ်မြုပ်သည်ဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူကြသူများသည်သင့်ကို စရိတ်စကတက် သဖြင့်ရှားပါးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာ မတန်တစ်ရာဈေးဖြင့်ရောင်းချဖောက်ကားလာ နိုင်ပါသည်။ ထို ့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကာ မှန်ကန်သည့်စားကုန်ကိုသာ ဝယ်ရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာဆိုရမူ ဆန်တစ်အိတ်အတွက် အမှန်တစ်ကယ်ပေါက်ဈေးဖြင့်သာ ရောင်း ချသူကိုရှာဖွေရမည်မှာသင့်တာဝန် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ကိုင်းစာရေးသူရော သင်ရောပါအနည်းဆုံးစာရင်းမှစကာ စီစဉ်ကြည့်ကြရအောင်။
• သင့်မိသားစုအားလုံးအတွက် – ၁ ပါတ်စာ – ကိုစတင်တွက်ချက်ပါ။ (ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အဆင်သင့်တွက်ချက်ပြီးသားအမယ်စုံထုပ်ပိုးထားသည့် တစ်ယောက်စာအစုံအဆင့်သင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူယနေ ့အထိပြင်ဆင်ရောင်းချခြင်းမရှိသေးပါ။ စီးပွား ရေးသမားများစဉ်းစားသင့်ပါသည်။) တွက်ချက်ရာတွင် ငါးပိရည်ကြို၊ ငါးပိစိမ်းစား၊ ငါးခြောက် စသည့်ပြည်တွင်းဖြစ်အစားအစာများကိုပါအခြေခံစားကုန်အဖြစ်ဝယ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်တွင် မှ စည်သွပ်ဗူးစသည်တို ့ကိုတစ်ဆင့်တက်ကာဝယ်သင့်ပါသည်။
• ၁ ပါတ်စာပြည့်စုံပါမှ နောက်ထပ် ၁ ပါတ်စာ စသည်ဖြင့် လှေကားတစ်ထစ်ချင်းတက်သကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်တိုးဝယ်ကာတတ်နိုင်သည့်ပမာဏအထိဝယ်ယူပေးပါ။
• သင့်ရေခဲစတိုထဲရှိစားဖွယ်များကိုကြိုတင်စုစောင်းသည့်စားစရာအဖြစ်ထည့်မတွက်ပါနှင့်။ ၎င်းတို ့သည်တစ်ရက်အတွင်းပုပ်သိုးကုန်များဖြစ်ပြီး မီးအားပြတ်တောက်သည်နှင့်သင့်အတွက် ဝန်ပိုတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ အမဲတစ်ကောင်စာသိမ်းထားနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသင့်အတွက် အကျိုးဝင်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ အအေးခံထားမည့်အစား မီးကင်ကာကျပ်တိုက်ထားခြင်း၊ အခြောက်ခံထားခြင်း၊ တာရှည်ခံရန်ချက်ထားခြင်း၊ လေလုံဗူးဖြင့်သိမ်းဆည်းြဲခင်းစသည်တို ့ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
• ကြောင်အိမ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောစားစရာများကိုရေတွက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သင့်အတွက် တစ်ပါတ်စာမည်သည်တို ့လိုမည်ကိုသိနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်အနည်း ငယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စည်သွပ်ဗူးအနည်းငယ်၊ ဘီစကစ်မုန် ့နှင့်မြေပဲထောပါတ်တစ်ပုလင်း ရှိပြီးသားဖြစ်ပါမူ သင်သည်စုဆောင်းရေးပန်းတိုင်တစ်ဝက်သို ့ရောက်နေပါပြီ။ သို ့သော်သင်၏ အချိန်နှင့်အမျှဆာလောင်တတ်သောအကျင့် (သို ့မဟုတ်) ရုံးမှအပြန်အသားမျိုးစုံကိုဝယ်စား တတ်သော အကျင့်တို့(တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယ သမားများလုပ်လေ့ရှိပါသည်) ရှိမည် ဆိုပါက သင့်အကျင့်ဆိုးများကို အရင်ဦးဆုံးဖျောက်ဖျက်ရပါလိမ့်မည်။
• အသေးစိတ်အစားအစာထားသိုလ်သိမ်းဆည်းပုံများကို သိုလှောင်ပုံအမေးအဖြေများ အခန်းတွင်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို ့သော်သင်သည်ယေဘူယျအားဖြင့် စည်သွပ်ဗူး၊ ပုလင်းသွပ်အစားအစာ၊ သို ့မဟုတ် များကိုဝယ်ယူသင့်ပါသည်။ သင့်မိသားစု ကြိုက်နှစ်သက် သည်များ၊ မကြိုက်နှစ်သက်သည်များကို လေ့လာထားပြီး သူတို ့စားလေ့စားထရှိသည်များကို လည်းသင်မေ့မထားသင့်ပါ။
• ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ရန် လောင်စာဖြစ်သည့် ထင်း၊ မီးသွေး၊ မီးခြစ် တို ့ကိုလည်းထည့်သွင်း စဉ်းစားထားကြရန်လိုပါသည်။
လောလောဆယ် ၊ စာထဲအတိုင်း ဝယ်ဖို ့ရာ
You are correct, Money comes always first.
Me neither searching for money!!!
လိုက်နာပြီးတိတိကျကျလုပ်ဖို ့ခက်ပေမယ့် မှတ်သားထားသင့်တဲ့
ပို ့စ်မို ့ကျေးဇူးပါလို ့
Knowing something is precious than knowing nothing, so thanks for your noticing.
ထောင့်စေ့အောင်တွေးနိုင်တာကိုချီးကျူးပါတယ် sis တကယ့်အခြေအနေမှာဆို စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပဲ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီးလုပ်ရုံသာရှိတာမို့ အဖိုးတန်ပါတယ်.. ကျေးဇူး ပါ